Ma ahan Real Madrid mana ahan Paris-St Germain… Kylian Mbappé oo doortay kooxda Barcelona – Gool FM
Ma ahan Real Madrid mana ahan Paris-St Germain… Kylian Mbappé oo doortay kooxda Barcelona
Dajiye June 21, 2019
(Paris) 21 Juunyo 2019. Weeraryahanka kooxda Paris-St Germain ee Kylian Mbappé ayaa murun xoogan dhaliyay sawir uu soo dhigay boggiisa rasmiga ah baraha bulshada ee Instagram -ka xili uu ku gudi jiro fasaxiisa xagaaga.
Kylian Mbappé ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Paris St Germain Isbuucyadii dhowaa, Real Madrid ayaana ah kooxaha sida xoogan u xiiseenaya inay helaan adeegiisa.
Mbappé ayaa soo dhigay boggiisa Instagram-ka sawirka isagoo la ciyaaraya mid ka mid ah saaxiibadiis ciyaar gacmeedka FIFA 2019, waxaana layaab noqotay in ciyaaryahanka reer France uu doortay kooxda Barcelona, ​​ma dooran kooxdiisa haatan ee Paris St Germain ama xitaa Real Madrid.
Kylian Mbappé ayaa horey u shegay inuusan jeceleyn in ciyaar gacmeedka uu ku ciyaaro kooxdiisa PSG wuxuuna yiri:
“Ma jecli inaan doorto kooxdeyda, sababtoo ah maalin kasta ayaan la ciyaaraa”.
“Kooxda aan dooranayo, waxay ku xiran tahay duruufaha, Mararka qaar waxaan ku ciyaaraa Monaco oo ah kooxda magaaladeyda, ma fiicna sanadkan, waxaa laga yaabaa inaan doorto Liverpool sababtoo ah waxay ku guuleysteen Champions League, waxaan ahay taageere kooxda Jürgen Klopp”.
RASMI: Halyeeyga Chelsea Petr Cech oo kusoo laabtay Stamford Bridge & Marina Granovskia oo soo dhaweysay.
“Waxaan rajeynayaa inaan la ciyaaro xulalka Masar iyo Senegal” - Naby Keïta oo fariin u diray saaxiibadiis Saalax iyo Mané